MULLEIN: GURYAHA DAAWOOYINKA IYO WAXYAALAHA KA HORTAGA, GURYAHA DAAWOOYINKA, ISTICMAALKA GEEDKA. XANNAANAYNTA, DARYEELKA IYO ABUURISTA HOYGA BOQORTOOYADA EE GURIGA - SOOSAARKA DALAGGA
Korovyak officinalis: isticmaalka sifooyinka wanaagsan ee dhirta daawada dhaqameed
Maanta, dhirro badan ayaa loo isticmaalaa daawada dhaqanka si looga hortago cuduro kala duwan. Maqaalkeena waxaan kuu sheegi doonaa waxa Doodwaduhu yahay, noocyada dhirta iyo sida loo koro oo loo isticmaalo si habboon si loo daaweeyo cudurada.
Korovyak waa geedo bienan ah oo leh stem soy ah, dhererkeedu wuxuu gaaraa 150 cm, wuxuu leeyahay caleemo waaweyn oo leh qaab-firfircoon - kuwa ku yaal hoose ayaa leh cabbirka ugu weyn.
Badanaa, dhirta ayaa leh ubaxyo yar yar oo lagu rinjiyeeyo midab huruud ah waxayna ku ururaan burush cad. Waxaa sidoo kale jira kala duwanaansho mullein ah, oo ubaxyada lagu soo ururiyey burushka leh qaab pyramidal ah.
Waa muhiim! Xannhado aan midabkeedu ku habbooneynin duurjoogta - dhirta ayaa si aan dhaqsiyo lahayn ugu duudduubin iyaga oo dhawaan u dhiman doona.
Mullein duurjoogta ah waxaa lagu gartaa midab cad oo ubaxyo leh. Waxay ku kala duwan tahay in ay ku daboolan yihiin qaro weyn. Plant ubaxayaa dhammaan xagaaga. Miraha waxaa lagu matalaa sanduuqyada caleemaha ee geesaha, waxay leeyihiin urin qaas ah. Ugu wanaagsan ee dhan, Doodwalka ayaa ku kora ciidda bacaadka ah oo ku xiran iftiin wanaagsan. Meelaha ugu caansan ee koritaankiisu waa caleen buuraha iyo geesaha keynta.
Ka kooban kiimikada
Korovyak ayaa hodan ku ah qaybo kala duwan oo waxtar leh. Waxaa ku jira tiro badan:
Intaa waxaa dheer, ee mullein content weyn:
Noocyada caanka ah: waxa u eg sida Doodwanaag
Maanta waxaa jira noocyo kala duwan oo ah mullein. Tixgeli kuwa ugu caansan.
Dhuunta caadiga ah
Inta badan waa dhegta dhagta. Tilmaamuhu wuxuu ku jiraa pubescence cufan oo dhan qaybo ka mid ah warshadda leh hurdo gaaban iftiin. Caleemaha waxaa lagu rinjiyey cagaar madow iyo si siman u qaybiyey dhammaan biqil. Dhinaca sare ee dhirta waxaad u eegi kartaa inflorescence gaaban, oo la mid ah baalalka. Dhererka caleemaha hoose waa 15-30cm. Caleemaha waaweyn ayaa ku yaala aagga asalka ah, korna u kaca heerkulkooda. Nidaamkan caleenta ah wuxuu siinayaa dhirta qaab muuqaal ah. Ubadka waxaa ka mid ah tiro badan oo ubax yar yar, dhexroorka kaas oo ah ilaa 2 cm.
Waxaad baraneysaa sifooyinka wanaagsan ee dhirta nooca caynkan ah sida sedaxda, saddex saacadood oo caleen ah, dab damis ah, laadkii alwaaxa, immortelle, birta birta ah, xargaha, dahabka, sedge, cagaarka cad, caleenta, barbariga qorraxda, cawska iyo qallalan la qalajiyey.
Tall (xajmiga boqortooyada, ubaxyo badan, ubax)
Noocyadaasi waxay magaceeda ku heleen heerkul aad u sarreeya: Boqortooyada - 1.5 mitir, iyo ubaxyo badan oo ubax ah waxay gaari kartaa 2 mitir. Warshadu waxay leedahay ubaxyo pyatilepestkovye waaweyn oo leh jaale huruud ah iyo qaab aan joogto ahayn. Dhexdhexaadiyuhu wuxuu kudhowaad yahay illaa 50 mm. Diidmida noocan oo kale ah waxay ku kala duwanyihiin nidaam cufan oo ubaxyo iyo burooyinkeeda on biqil - farqiga u dhexeeya iyaga waa kuwo aad u yar. Waxaa jira warshad ku taal xayawaanka carrada, wadooyinka, kaymaha, beeraha.
Heerka noocan ah waa qiyaastii 1 mitir. Waxay leedahay tuubo, oo uu leeyahay tabardarro leexasho leh. Qeybta hoose ee stem waa caleenta cufan, qaybta sare caleemaha waxay leeyihiin foomka qulqulka-qotonka ah. Inflorescences aad bay u weyn yihiin, leeyihiin midab jilicsan oo jilicsan.
Warshadu waxay leedahay 5 stamens iyo hal fuudhe. Miro ayaa lagu matalayaa sanduuqa guud. Ubaxku wuxuu dhacaa Juun iyo Julaay. Ubaxyo beerto iyo caleenta waxay dhacdaa inta lagu jiro xilliga ubax ee dhirta.
Dhererka ah ee afkoda noocyada noocan ah waxay gaareen 1.5 mitir, waxay ku kala duwan yihiin dabool weyn oo caleemo ah. Qaybta kore waxay leedahay inflorescence, oo mararka qaar ku dari kartaa dhowr caleemo. On dusha sare ee dhirta oo dhan waxaa jira foorno dareemay. Caleenta waa oval, gees jilicsan.
Dhererka caleen wuxuu kudhisan yahay celcelis ahaan 15-25 cm Waxaa jira ubaxyo ku yaala dhirta, kuwaas oo leh jilicsanaan jilicsan oo soo ururiya inflorescences. Dhexdhexaadiyaha ee inflorescences waa ka duwan yahay: laga bilaabo 3.5 cm ilaa 5.5 cm. Warshadaha geedka ayaa casaan iyo si cad u taagan.
Ma taqaanaa? Ka hor inta aan dharka textile soo saarin, Doodwanaag ayaa loo isticmaalaa in dheehado dhajiyo: Soodhiga ubaxa waxay iyaga siin kartaa midab jaale ah ama midab cagaaran.
Noocaan of Doodwanaag ah wuxuu leeyahay height ah 50 illaa 120 cm, ayaa qumman yahay afkoda. Caleemaha waaweyn waxay ku yaalaan inta badan qaybta hoose ee jiritaanka. Caleenta caleenta ah waxay ku jirtaa qaabka ukunta ama wadnaha. Dhererkoodu wuxuu kudhowaad yahay 20 cm Cagaarshow dheer waxaa ku jira ubax yar oo jaale ah.
Goobta tufaaxa waxaa lagu daboolaa lowska madow, iyo muraayadaha waxaa ku jira fibre-lakac. Muuqaal noocan ah waa in ubax kaliya loo isticmaalo ujeedooyinka daaweynta.
Warshadu waxay leedahay asliga ah qallafsan, dhererkeedu wuxuu kudhowaad yahay 130 cm Caleemaha waxay leeyihiin nadiifin, qaab muuqaal ah. Ubaxuhu sida caadiga ah waxay ku ururaan burush, ka dibna waxay sameeyaan panicle panamide. Corolla waa midab huruud ah waxayna leedahay 5 xawaare. Miro ayaa lagu matalayaa sanduuq, waxay leedahay 5 stamens.
Ubax ayaa la qabtaa dhammaan bilaha kulaylaha. Noocyada nooca mulleinka ah ayaa inta badan laga helaa buuraha ama dhulka qallalan. Daawada dadweynaha, rhizomes, caleenta iyo ubaxa dhirta ayaa loo isticmaalaa.
Heerka asliga ah ee dhirta noocyada noocan ah waxay noqon kartaa 1 ilaa 2 mitir. Waxay leedahay qaab xoog leh, waxaa lagu kala saaraa ciriiriinteeda, waxa uu yaraa kan ugu sareeya. Magnificent Mullein wuxuu leeyahay caleenta oo dhan. Caleemaha lagu riixo xagga hoose waxay leeyihiin qaab qaab-wareeg ah, dhererkoodu waa 20-40 cm, width - 3-6 cm.
Caleenta ku yaal qaybta sare waxay leedahay qaab wadnaha ah. Inflorescences waxaa ka muuqda panicle pyramidal. Corolla waa midab huruud ah, iyo walxuhu waa caddaan. Boll wuxuu leeyahay qaab muuqaal ah.
The guryaha bogsashada of Doodwanaag
Korovyak badanaa ayaa loo isticmaalaa si loola dagaallamo cudurro kala duwan, maadaama ay leedahay guryaha soo socda:
Cawsku ma awoodi karo, burooyinka bjørk, anemone, gravilat, poultice udgoon, beero qoyan, wakhti wakhti woqooyi, ash, barberry iyo dabka ayaa sidoo kale leh saameyn diaphoretic ah.
waxay kor u qaadeysaa wacyigelinta.
Video: bogsiinaya sifooyinka dooxada
Qayb ka mid ah mullein ayaa leh xabka, kaas oo si wacan uga takhalusaya geeddi-socodka bararka, baqshiinka oo dhammaystiran, wuxuu kor u qaadaa wacyigelinta, natiijada ka soo baxda qanjidhada ayaa si fiican u kala soocaya. Glucose waa qeybta ugu muhiimsan ee tamarta jirka ee bini'aadamka, waxaa lagama maarmaan ah in lagu xasiliyo hababka dheef-shiid kiimikaadka, iyo sidoo kale hubinta waxqabadka caadiga ah ee dhammaan nidaamyada iyo xubnaha.
Thanks to saponins ee abuurka geedka, candhuufta waa la qallajiyey oo la bakhtiiyey, horumarinta unugyada kansarka ayaa la joojiyey. Waxaa intaa dheer, waxay qabaan saameyno anti-sclerotic, sedion ah, duriinka iyo saameynta expectorant.
Waad ku mahadsan tahay flavonoids, maraakiinnadu waxay noqdaan kuwo cufan, koofiyadaha ayaa la xoojiyaa, ficillada xaglaha waa mid dhexdhexaad ah, shaqada nidaamka habdhiska dareenka ayaa caadi ah.
Sababtoo ah saliidaha lagama maarmaanka ah, hawsha wadnaha iyo habka caloosha iyo mindhicirka ayaa wanaajiya: waxay kaa caawinayaan yareynta qufaca iyo kordhinta kala-saarista xab-ka, waxay leeyihiin saameyn bakteeriyada, anti-bararka iyo sifooyinka. Gum, oo ah qayb ka mid ah dhirta, waxay gacan ka geysataa xasilinta habka dheef-shiidka, habka caadiga ah ee microflora, ka saaro sunta, hoos u dhigto heerarka kolestaroolka. Sababtoo ah saameynta guurka, khafiifinta dhiigga ayaa dhacaya - waxay leeyihiin saamayn maqaarin ah, antiseptic, saameyn raadraac ah.
Carotene waa immunostimulant dabiiciga ah, waxay gacan ka geysaneysaa kordhinta caabbinta jirka ee caabuqyada kala duwan iyo fayrasyada.
Iridoids oo ka mid ah dooxada mulinka ayaa leh saameyntan soo socota:
Maple, walnut madow, haweenka, stevia macenta iyo turmeric ayaa sidoo kale leh hanti aan laga tallaalin.
waxay tirtiraysaa geeddi-socodka bararka;
Thanks to acid acids-ka ah qayb ka mid ah mullein, waxaad ka saari kartaa infakshinka waqti gaaban: waxay leeyihiin saameyn antiseptic, oo lagu wanaajiyo qanjirada.
Tannins-ka ayaa lagu kala duwan yahay joogitaanka hannaanka anti-bararka, bakteeriyada iyo dabiiciga. Thanks to alkaloids, cadaadiska dhiigga ayaa la yareeyey iyo caadiyan, waxay si fiican u suuxin, waxay leeyihiin saameyno hemostatic iyo sedative.
Daawada dhaqameedka, maraqyada iyo fusada ka timid dhirta ayaa si firfircoon loo isticmaalaa. Isticmaalka daawooyinka noocan ah waxay caawiyaan in si deg deg ah looga takhaluso qufaca, boogaha caloosha iyo boogaha duodenal.
Waa muhiim! Inta lagu jiro diyaarinta infusions ama decoctions, hubso inaad si taxadar leh uga saarto stamens, maadaama ay sababi karaan cadho maqaarka iyo xuubka xabka.
Tani waa macquul sababtoo ah waxaa jira saabuuniin iyo xabo oo ku yaalla duufaanka. Sidoo kale, decoctions waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cudurrada maqaarka sida cambaarta, vitiligo, cudurka psoriasis.
Intaa waxaa dheer, isticmaalka tincture leedahay saameyn togan ka hor joogitaanka:
Ka hortagga iyo daaweynta xanuunka atherosclerosis, daawada caleenta, fangaska, malayga, astragalus, iglitsa, diirka basasha iyo saliidda karka ayaa sidoo kale loo isticmaalaa.
Marmarka qaarkood mullein ayaa loo adeegsadaa maaddo madaxbannaan, mararka qaarkoodna waxaa lagu daraa dhir kale. In dhirta ee dhirta ay yeelan karaan saamaynta ugu fiican.
In joogitaanka cudurka kelyaha waxaa lagu talinayaa in ay si joogto ah u isticmaalaan decoction ah caleenta caleenta.
Maraq wuxuu sidoo kale kaa caawinayaa si dhakhso ah ula qabsada geedi socodka bararka kaadiheysta iyo edemas kala duwan.
Haddii aad qabtid dhibaatooyin neefsasho, neef ama hargab, waa inaad qaadataa faleebo caleemo, caleenta iyo ubax.
Haddii la ogaado sida cudurka qaaxada (tiibay), bararka sambabada ama caarada ayaa la sameeyaa, waa in la qaadaa faleebo.
Iyadoo jiritaanka xanuunada dareenka, waxaa lagula talinayaa in ay isticmaalaan faleebo ka soo ubaxa geedka.
Haddii cagahaaga iyo lugahaaga ay waxyeelaan, waa inaad xoqdaa tincture saliida alkolada.
Daaweynta iyo bogsashada boogaha waxay noqon doonaan kareemo waxtar leh.
Faleebo ayaa kaa caawineysa inaad la qabsato suuxdin, madax xanuun, casiraad.
Waxyeellada iyo iska horimaadyada
Guud ahaan, mulleinku ma laha liis badan oo ka hortag ah, laakiin ka hor intaadan isticmaalin waa inaad kala tashataa dhakhtarkaaga. Waa inaad sidoo kale fiirisaa qodobbada soo socda:
Laguma talin in la isticmaalo infusions iyo decoctions of mullein inta lagu jiro uurka iyo inta lagu jiro nuujinta;
waa mamnuuc in la isticmaalo mullein leh dulqaad shakhsi ah;
Xaqiiji in aad soo saartid infusions iyo decoctions, sida timo yaryar, hal mar ku jira hunguriga iyo caloosha, waxay sababi kartaa cuncun;
waa mamnuuc in la isticmaalo abuurka geedka gudaha - waxay yihiin sunta;
Xaaladaha qaarkood, sababtoo ah joogitaanka tannin ee ka kooban, diyaarinta mullein-ku salaysan waa ka mamnuuc dadka qaba kansarka.
Sida loo dhiso iyo diyaarinta dhirta bogsashada
Waxaan ku siin karnaa cuntooyinka isku dhafan ee daawada Doodwanaag, kaas oo kaa caawin doona inaad la qabsato cuduro badan.
Si aad u karsato maraq, waa inaad:
1 tbsp. qaaddo of caleenta mullein qalajiyey;
200 ml oo biyo ah.
Caleemuhu waa inay ahaadaan dhulka, ku dar biyo iyo karkari ilaa 1 daqiiqo. Ka dib markaa, maraqku wuxuu ku adkeeyaa nus saac. Kadibna waxaa haboon in shaandhaynta lagu caawiyo faashad, ku duuban dhowr lakab - tani waxay gacan ka geysaneysaa tirtiridda aan loo baahnayn.
Maraqku wuxuu ka caawin doonaa inuu la qabsado cudurka sida cystitiska, iyo sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa kareem si loo tirtiro nabarada. Qaado 1 tbsp. qaaddo saddex jeer qaadashada hal mar.
Daaweynta cystitis ee daawada dadweynaha, waxaan sidoo kale isticmaali jiray qolada, caleemaha lingonberry iyo caloosha geed.
Si aad u diyaarisid cadarka, waxaad u baahan doontaa:
Si aad u diyaarisid cadarka, waxaad u baahan tahay inaad abuurto miraha saliidda ku jirta saamiga 1 illaa 2 oo si qoto dheer u xoqa. Baalashadani waxay si degdeg ah uga takhalusi doontaa nabarada nabarada iyo nabarada. Codso waa inay noqotaa 2 jeer maalintii goobaha ay dhibaatadu saameysey.
Si aad u sameyso tincture kaas oo kaa caawin doona radiculitis, arthritis iyo laabotooyinka, waxaad u baahan doontaa:
1 qaado oo ubax ah ubax;
100 ml oo khamri ah.
Waa lagama maarmaan in la isku daro walxahaas, tincture ku rid meel gudcur ah 14 maalmood, ka dibna cadaadis. Isticmaal xaalada xanuun markaad isticmaasho habka xoqidda.
Si aad u diyaariso tincture for timo lumis iyo seborro, waxaad u baahan doontaa:
1 qaado oo mullein ah;
500 ml oo biyo ah karkaraya.
Ma taqaanaa? Sababtoo ah xaqiiqda ah in ay jiraan daaqado badan oo dusha sare leh ee dhirta, galbeedka Maraykanka waxaa loo yaqaan "warqadda musqusha suunka".
Waxaa lagama maarmaan ah in la buuxiyo cawska biyaha, ku adkeyso dhererka 1.5-2 saacadood. Isticmaal tincture 150 ml saddex jeer maalintii. Marka lagu daro isticmaalka gudaha, waxaad u isticmaali kartaa sida shubo.
Si aad u diyaariso faleebo ee boronkiitada, waxaad u baahan doontaa:
2 qaado oo ah geedo yaryar;
250 ml oo biyo ah.
Grass ku shubay biyo kuna adkeyso 1 saac. Qaado 1 qaado oo 3-4 jeer maalintii. Marka la daaweynayo carruurta, waxaa habboon in la siiyo 1 qaado oo qaaddo maalin kasta. Sidoo kale, faleebo ayaa loo isticmaalaa in lagu dhaqo afka.
Mullein: daryeelka iyo beerista abuurka
Kuwa doonaya in ay si madax banaan u koraan warshad daaweyn, macluumaadka soo socda ayaa faa'iido leh.
Xulashada goobta iyo iftiinka
Warshadda ma dalban, sidaas darteed waa la abuuri karaa ciidda, xitaa bacrin ah hooseeyo. Si kastaba ha noqotee, laguma talinayo in la doorto qoyan, dhoobo ama loamy ciidda beeritaanka. Inkastoo duufaanku caadi ahaan koraan iyo hooska, meelaha wanaagsan ee iftiimaya ayaa ku habboon beeritaanka.
Substrate iyo diyaarinta bacriminta
Bacriminta macdanta ayaa lagu dari karaa ciidda taas oo abuurka lagu beeray, ciid, jeex iyo peat waa in lagu daraa. Wixii bacarimiso dhirta qaangaarka ah, waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo Bacriminta dabiiciga ah ama macdanta ee laga isticmaalo aagga asalka ah.
Beerista iyo dhalmada
Waxaa lagu talinayaa in lagu abuuro abuurka dhul furan May ama June. Waxyaalaha abuurka ah ayaa si aan kala sooc lahayn loogu sarreysiinay sariirta loona rusheeyey dusha sare ee dhulka. Ka dib markii ay soo baxaan caleemaha, waa in lagu qalqaaliyo si masaafada u dhexeysa duurka waxay ahayd 20 cm. Ubaxku caadi ahaan wuxuu dhacaa sanadka labaad.
Waa muhiim! Si aan isku qasin kan sare iyo kan hoose ee jarista, samee mid ka mid ah jarjaran, iyo kan labaad oo toosan.
U faafi warshadda midba midka kale ama abuur. Isticmaalida habka labaad, gooyn waa in la gooyaa ka dib xilliga ubax, bisha September, dhammaadka - tani waxay dardar-gelinaysaa aasaasida.
Waraabinta iyo qoyaan
Waxa lagama maarmaan ah in lagu waraabiyo warshad kaliya marka ay dhacdo cimilada qalalan muddo dheer. Korovyak uma baahnid biyo badan - samee waraabinta kaliya marka ciidda ay si fiican u qalajaan.
Xaqiiqdu waxay tahay in nidaamka xididka uu aad u galo ciidda, sidaas darteed waxaa lagu quudin jiray dhulka dhulka. Haddii aad daadi geedka, qoyaan dabacsan ayaa sababi kara in uu jabo si loo yiraahdo, geedka ayaa dhiman doona.
Jiilaalka iyo xoqidda
On caws iyo caleenta warshad waa buufin leh, kaas oo awood u leh inuu ka ilaaliyo dhaxan iftiin. Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto in duufaanku si guul leh u noolaado heerkulka hooseeya, kahor bilawga xilliga cimilada qaboobaha, waxaa habboon in lagu rusheeyo dambaska, balka, dhirta ama caleemaha iyo laanta. Waxa kale oo lagama maarmaan ah in waqti gaaban cawska la gooyo: waa in laga saaro ubax la jarjaray. Haddii aan laga saarin, waxay hoos u dhigi doonaan ubaxyada burooyinkooda caadiga ah, ka dibna waxay ka dhigi doonaan abuurka ciidda. Ka dib markii muddada ubax waa la dhammeeyaa, waa lagama maarmaan in la gooyo caleemaha oo dhan.
Xaaladaha intooda badan, dhirta ayaa u adkaysata cudurrada iyo cayayaanka, laakiin marmarka qaarkood waxaa lagu weerari karaa cayayaanka geela. Si looga takhaluso, waxaa lagu daaweeyaa cayayaanka sida "Fitoverm", "Omayt", "Kemifos" iyo "Lepidotsid".
Goobidda iyo kaydinta alaabta ceeriin ah
Grasss ubaxyada bilaha xagaaga, laakiin miraha bislaadaan laga bilaabo Agoosto ilaa October. Si aad u ururiso ubaxyada, dooro hawo qallalan oo qorrax leh: waxaa lagula talinayaa in ay sameyso habka subaxda, laakiin ka dib marka dharabku ka yimaado, sida looxyada qoyan waxay helayaan midab madow iyo luminayaan guryaha bogsashada. Waa lagama maarmaan in la qalajiyo duufaan ka yar caleenta ama isticmaalka qalajiyaha leh heerkul ah 50 ° C. Faafidda geedka waxay u baahan tahay lakab khafiif ah. Waxa kale oo aad qallajin kartaa cawska gudaha, laakiin waa in si fiican loo rinjiyeeyo. Waa inaadan dhigin qorraxda, sida duufaanku lumin doono midabka dabiiciga ah iyo bogsashada guryaha.
Ma taqaanaa? Sida ay aaminsan yihiin, waxaa la aaminsan yahay in dhammaan jinniyaadka sharka leh ay ka baxayaan guriga., haddii aad sigaar cabto qiiqa.
Ka dib markii mullein si fiican loo qalajiyey, waa lagama maarmaan in la kala soocdo, kala sooc caleemaha caleemaha, ka nadiifi cawska kaas oo la soo goostay, ku duub weelasha dhalada oo daboolka ku dabool daboolka. Wixii qashin ah ee caleenta iyo cawsaha waa inay isticmaalaan bacaha warqadda. Ku keydi qalabka cayriin wax ka badan 2 sano.
Isticmaal naqshad dhuleed
Marar badan, Doodwanaag ayaa loo isticmaalaa si loo abuuro qaababka muuqaalka. Waxay u eegi doontaa habka cawska. Si kastaba ha noqotee, si aad uga dhigto halbeegga udhexeeya, waxaad u baahan tahay inaad xulato deriska saxda ah ee warshadda. Cawsku wuxuu si fiican u heli doonaa salvia, stachis, catnip, iyo hawada.
Noocyada tallaalka ah waxaa loo isticmaalaa in lagu qurxiyo asalka dabiiciga ah iyo sariiraha ubaxa, waxaa loo isticmaalaa in lagu qurxiyo deyrarka iyo derbiyada. Noocyada sii kordhaya ayaa inta badan loo isticmaalaa si kor loogu qaado weelasha.
Korovyak - warshad caafimaad, taas oo, marka si habboon loo dabaqo, waxay kaa caawin doontaa in laga takhaluso jirrooyin badan. Waa arrin aan qabyo ahayn daryeelka, sidaas darteed waxaa lagu kori karaa dadaal yar oo ku saabsan goobtaada.
Sida loo kobcin karo helitaanka flamingo (flamingo pink) iyo daryeelkeeda
Sida loo sameeyo sariirta ubax quruxda badan ee dhagaxyada?
Daawooyinka xayawaanka ah "Dufalayt": cidda ku haboon iyo sida loo dalbado
Sida loo koro dabocase laga soo geedo iyo daryeel iyaga on goobta
Daryeelka Guriga ee Filibiin Clerodendrum
Noocyada Lacagta ah
Bannaanka u sii kordhaya si taxadar leh u bixiyaan si loo yiraahdo qajaarka Shiinaha, oo ah noocyo kala duwan oo qajaar ah oo caadi ah. Kuwani waa geedo cajiib ah oo leh sifooyin wanaagsan oo badan. Maqaalka waxaad ka baran doontaa mid ka mid ah noocyada, kaas oo loo yaqaan "Farmer F1 F1", ku saabsan faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada, iyo sidoo kale ku saabsan dareenka iyo shucuurta beerashada. Read More
Tilmaamaha iyo sawirada guryaha xayawaanka Asparagus Sprenger
Waa maxay faa'iidooyinka iyo waxyeelada qashinka